Mbiri yekambani - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. yakavambwa muna 2008.
XY Tower ndeimwe yevagadziri veshongwe huru yekufambisa tambo kumadokero kweChina.Iyo kambani inopa akasiyana galvanized simbi zvimiro, nyanzvi mu500kV uye pasi pemagetsi tambo shongwe, substation chimiro, shongwe yekutaurirana, magetsi njanji chimiro, nezvimwe.
XY Tower inovhara nzvimbo inosvika 33,000 square metres uye ine gumi otomatiki yekugadzira mutsara ine gore negore kugadzirwa kugona matani makumi matatu.Iwo manejimendi eXY Tower ane ruzivo rwakakura muindasitiri yemagetsi.Mari yekambani inodarika mamiriyoni makumi maviri emadhora, ukuwo zvigadzirwa zvekambani zvakashandiswa zvakanyanya neChina.
XY Tower ndiye mutengesi ane hunyanzvi weNational Grid, Southern China Power Grid uye akawanda ane mukurumbira makambani emagetsi.
XY Tower inopa sevhisi kumazana evatengi vanoyambuka nyika.Iye zvino XY Tower iri kuvandudza musika wekunze nekukurumidza.XY Tower ine chinangwa chekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi yehunyanzvi kune vatengi pasi rese.Vatinoshanda navo veXY Tower vakatovhara South America, Africa, Southeast Asia nezvimwe.
XY Tower inoita chisungo chekuti isu tinogara tichipa basa rehunyanzvi kune vese vatengi vedu.Tiri kutarisira kubatana nemi.
Nhoroondo ye Corporation
Chivakwa chitsva chehofisi uye musangano zvakapedzwa zvinobudirira, uye mhemberero yekutamisa inotarisirwa kuitwa kutanga kwa2021.
Chigadzirwa chitsva uye chivakwa chehofisi chinotanga kuvakwa, mushure meizvozvo, huwandu hwekugadzira huchapfuura 30,000 matani pagore.
New Hot dip galvanized plant yakavakwa
Nzvimbo yeHot dip galvanized plant inopfuura 12,000 m2
Akawana bhizimusi reguta rakatanhamara.
Mari yegore kekutanga inodarika 100,000,000 RMB
Rejista yakanyoreswa capital inosvika 50,000,000RMB, Takahwina kondirakiti yekutanga kubva kumusika wemhiri kwemakungwa (Sudan).
Kubuda kwepagore kwekutanga kwakasvika 10,000 tons tower
Kugadzirwa kutsva kwakavakirwa kwakavakirwa Nzvimbo itsva yakavakirwa inopfuura 30,000 m2 uye yakakura kwazvo kupfuura kare
Sichuan XiangYue tower Co., Ltd.yakawanikwa yakatarisana neindasitiri yesimbi shongwe, yakavaka musangano uye yakatanga kugadzira tambo yemagetsi shongwe
Trading Company yakahwina kondirakiti yekutanga yekutapurirana tambo shongwe
Sichuan XiangYue yemagetsi midziyo yekutengesa kambani yakawanikwa Zvikuru bhizinesi raitengesa transformer, tambo uye tambo, mutsetse Hardware nezvimwe.